RW Shirdon oo Markii Ugu Horaysay Dalka Somaliya Dibada Uga Baxa – Rasaasa News
R/Wasaaraha Somaliya Abdi Farah Shirdon iyo wafti uu hogaaminayo, ayaa maanta Dayaarad ka raacay magaalada Muqdisho, iyaga oo u kicitimay dalka Jabuuti. Safarkan, ayaa ah midkii ugu horeeyey ee uu dalka dibadiisa ku aado intuu noqday RW Somaliya sanadkii tagay.
R/wasaaraha ayaa booqanaya dalalka ay ciidamadu ka joogaan dalka Somaliya; Jabuuti, Kenya, Burndi iyo Ruwanda, isaga oo kala xaajoon doona hawsha nabad ilaalinta ee ay ciidamadaasi ka hayaan koonfurta Somaliya.
Waxaa kale oo uu R/wasaaruhu booqanayaa dalka Itobiya oo ah dalka ugu waxtarka badan dajinta nabada dalka Somaliya. RW ayaa kala xaajoon doona Itobiya in ay sii wado taakulada ay siiso dalka Somaliya.
R/wasaare Shirdoon waxaa soo foodsaartay dawladiisa fashil siyaasadeed, ka dib kolkii ay macnayn wayday sharcigii lagu soo dhisay dawlada.
Dalka Somaliya oo ah dalka ugu faashilsan aduunka dawlad la,aana ahaa muddo 22 sano ah ayey dalalka deeqda bixiyaa dastuur ugu sameeyeen dalka Kenya. Dastuurka ayaa ogol in Somaliya ay yeelato dawlad dhexe oo wadaag ah iyo dawlado iskood isu maamula oo hoostaga dawlada dhexe.
Waxaana muuqata in ay dawladiisu meesha ka saartay dastuurkii muddada dheer aduunku ka soo shaqeeyay, waxaana dalka dib uga soo muuqanaysay khilaaf beeleed oo ay dawladu horseed ka tahay.
Safarka R/wasaaraha ayaa salka ku haya arintaas waxaana xarunta dhexe AU lagu waydiin doonaa isbadalka cusub ee ay dawladiisu keentay iyo dagaalada horta leh ee ka bilowday gabalo ka tirsan koonfur
Salaadii Ciida Magaalada Jijiga oo Masjidul Aqsa Noqotay!